Carles Puyol oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Neymar Jr inuu dib ugu laabanayo Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 09 Luulyo 2019. Kabtankii hore ee kooxda Barcelona Carles Puyol ayaa ka hadlay arimo dhowr ah ee muhiim ah oo ay qeyb ka tahay arrinta ku saabsan Neymar Jr.
Daafacii hore xulka qaranka Spain ayaa xaqiijiyay inaysan wax dhibaato ah lahayn in markale uu Neymar Jr dib ugu soo laabto kooxda Barcelona inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Dhinaca kale Carles Puyol ayaa tilmamay in arrintan ay ku dhici karto kaliya hadii guddiga Barcelona ay aaminsanyihiin inay tahay wax u fiican kooxda, islamarkaana ay iska ilaabaan wixii dhacay xilli ciyaareedkii hore.
Carles Puyol oo ka hadlayay wararka la xiriirinayo Neymar Jr inuu dib ugu soo labanayo garoonka Camp Nou ayaa wuxuu yiri:
“Ciyaartoyda oo dhan waxay u maleynayaan in marka ay go’aan gaarayaan uu yahay kan ugu fiican, balse marka ay taasi dhacdo dadka qaar ayaa ka qoomameynaya”.
“Laakiin Neymar waa ciyaaryahan weyn oo isbedel sameyn kara, waxaan ku qanacsanahay in ciyaaryahanka reer Brazil uu wali heysto waxyaabo badan uu kubadda cagta ka sameyn karo”.
“Labadii sano ee la soo dhaafay, Neymar ma uusan awoodin inuu si fiican horumar u sameeyo sababa la xiriira xaalado badan, laakiin wax walba uu ka sameeyay kubadda cagta waxay ka dhigan tahay guul” ayuu yiri kabtankii hore kooxda Barcelona ee Carles Puyol.